I-china counter-flow evaliweyo yesekethe yokupholisa iiTowers / evaporative ivaliwe-isekethe Iicooler yoMvelisi kunye noMthengisi | Yubing
Ukuhamba-ngokuhamba kweesekethe eziValiweyo zokuPholisa iiTower / Evaporative ezivaliweyo zesekethe
Umoya opholileyo owomileyo ungena kwiindawo zokuphumla kumacala omabini enqaba emazantsi, uzobe uye ngaphezulu nangaphezulu kwekhoyili ngamandla avela kwi-axial fan efakelwe phezulu, ephazamisa amanzi awayo (avela kwinkqubo yokuhambisa amanzi) kunye nokwandisa ukuhanjiswa kobushushu kwimeko yomoya oshushu omanzi okhutshelwe ngaphandle kwinqaba ukuya emoyeni. Ngexesha lale nkqubo yokusebenza, isixa esincinci samanzi asasaza kwakhona ngumphunga ngenxa yokuhambisa ubushushu ngokufihlakeleyo ngombhobho kunye neendonga zekhoyili, kususa ubushushu kwinkqubo. Kule ndlela yokusebenza, ngenxa yokusebenza komphunga ukuthoba ubushushu bamanzi okushiya kunye namandla ombane agciniwe.
Inkcazo yokusebenza kwemveliso
Ukuthelekisa ii-tower-system ezivulekileyo zenkqubo yokupholisa, kulula ukuyigcina luphawu olwahlukileyo lwe-ICE's evaporative evaliweyo yesipholiso ezivaliweyo ezizezona ndlela iphambili kuyo nayiphi na inkqubo yokupholisa enezinye izibonelelo ezilandelayo:
► Ukunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi, ukugcina amandla kunye nokugcinwa kwezixhobo.
► Wuphephe umngcipheko obonakalayo wezinto ezingcolisayo kubananisi bobushushu okanye izixhobo ezifanayo.
► Ukufakwa okubalulekileyo kunye neendleko zokusebenza (akukho mfuneko yempompo, iivalves, imisebenzi eyongezelelweyo yombhobho njlnjl.)
►Indawo ebanzi yesicelo-izixhobo ezivaliweyo zelokhwe ziyafumaneka ukuze zisebenze kumaqondo obushushu angaphandle aqandayo. Iyahluka kakhulu ukusuka ekupholiseni izixhobo zenkqubo yokugcina imveliso ukugcina amaqondo obushushu kumaziko edatha nakwigumbi leekhompyuter ukwenza imveliso yamachiza.
I-ICE Evaporative counter-flow evaliweyo yesekethe coolers 'isakhiwo kunye nezinto eziphambili intshayelelo:
Inkqubo yokungenisa umoya (fan)
I-fan ye-axial yangaphandle enentsebenzo elungileyo yoyilo lokhuselo ezintathu, exhotyiswe nge-blade ye-aluminium kunye ne-IP56, imoto eqhutywa ngohlobo lwe-F enomoya ophefumlayo oya kuthi uthintele umoya kwaye unciphise ukuvuza.
Inkqubo yokuHanjiswa kwaManzi ePhambili
I-ICE evaporative evaliweyo evaliweyo yokupholisa iinqaba efakiweyo uhlobo lwebhasikiti yokutshiza imilenze ihlala ivaliwe ngaphandle kokubonelela nangokusasazwa rhoqo kwamanzi ukwandisa ukudluliswa kobushushu phakathi komoya, amanzi kunye nenkqubo yolwelo ukunyusa ukusebenza kobushushu.
Imibhobho yokutshiza ifakwe kwimibhobho yokuhambisa amanzi engenakho ukubola.
Ityhubhu ebomvu yoBhedu
Elona bhafu liphambili lifaka isicelo kumgangatho ophezulu we-T2 wobhedu obomvu othengiweyo kumenzi wegama elidumileyo ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo nokuzinzileyo kwezixhobo zethu.
Yenziwe kwaye yenziwa nge-PVC ukunciphisa ukulahleka kwamanzi ngexesha lokusebenza okumanzi kunye nokunciphisa umda wokukhukuliseka ekunciphiseni ukusetyenziswa kwamanzi kunye nokuthintela isikali.
Louver kunye neDamper
Kukho isampuli esisebenza ukulawula ukuhamba komoya ngexesha lokusebenza kweenqaba zokupholisa kufakwe emanzini athile, inkqubo yempompo yokufudumeza umoya okanye inkqubo efanayo yokupholisa ukuthintela ilahleko yobushushu ngexesha lokuphumla kwezixhobo ngakumbi kwimozulu ebandayo.
Xa ubushushu beatmosfera bungaphezulu kwe-0 ℉ (-18 ℃), ngesifudumezi sombane ubushushu bamanzi besitya abuyi kuba ngaphantsi kwe-40 ℉ (4.4 ℃). Kukho ukukhuselwa kwamanzi okuphantsi okubekwe kwindawo yokufudumeza amanzi ukuze kuqinisekiswe ukuba kuya kusebenza kuphela xa kugxunyekwe emanzini. Zonke izinto ezinxulumene nesifudumezi sombane zifakelwe ngaphakathi kwimeko kwaye zilungele ukusebenza ngaphandle.
Uyilo lwethambeka (ukuthambeka lubhekise ekuphumeni kokungcola okungcolileyo) ukunqanda ukuma kwamanzi kunye nesitshisi yentsimbi engenasici iya kuphucula ukugcwala kunye nokukhutshwa kongcoliseko kwangaxeshanye kucoca ukungcola kunye nobumdaka kwisitya.
I-ICE iinqaba ezipholileyo ezisemgangathweni zisebenzisa iphepha lakutshanje elinganyangekiyo ukubola. Ubomi benkonzo ngama-3 ~ ama-6 amaxesha amade ngokuthelekisa kunye ne-aluminized sheet yensimbi eqhelekileyo kunye nokuchasana nobushushu kunye nenqaku lokumelana ne-thermal nayo intle kakhulu.
Egqithileyo Ukuhamba komnqamlezo okuValiweyo kweSekethe yokupholisa iiTowers / iiVolor evaliweyo zesekethe
Okulandelayo: Inkqubo ye-ICE Chemical Dosing yoNyango lwaManzi kwiNkqubo yokuPholisa iNqaba
Iiparamitha zobugcisa be-Counter-flow Closed-circuit Circing tower
Inlet / ubungakanani umbhobho iplagi
Ubungakanani bombhobho wokubonelela
Uluhlu loxinzelelo lokusebenza
Kuvaliwe ukupholisa kwesekethe
Kuvaliwe ukuPholisa iNqaba
Isiphaluka esivaliweyo sokupholisa iNqaba
Ukuhamba kwe-counter-flow closed closed tower tower
Ukuphola okuvaliweyo komphunga
Evaporative Kuvaliwe coolilng tower
Amanzi apholileyo avaliweyo opholileyo kwinqaba yokupholisa